बाह्र वर्षपछि अशोक र राजेशको अंकमाल ! « Ramailo छ
बाह्र वर्षपछि अशोक र राजेशको अंकमाल !
समय : 5:22 pm
‘बाह्र वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ’ भने जस्तै निर्माता तथा निर्देशक अशोक शर्मा बाह्र वर्षपछि फिल्म निर्माणमा फर्किएका छन् । ‘मितिनी’ निर्माताले १२ वर्षपछि ‘जय भोले’ बनाएका हुन् ।
‘जय भोले’ बनाएसँगै शर्माको थुप्रै सर्जकसँग पुनःसहकार्य भएको छ । यस मध्येमा पर्न आउँछन् राई राइ किंग अर्थात् सुगम संगीतका सुपरहिट गायक राजेश पायल राई । स्वरमा सम्झिएका अशोकले राजेशलाई सम्मान स्वरुप उनको फाण्डेशनलाई आर्थिक सहयोग पनि गरेका छन् ।
राजेश पायल राईको फाउण्डेशनलाई अशोक शर्माले पच्चीस हजार रुपैयाँ सहयोग स्वरुप हस्तान्तरण गरे । बिहिबार जय भोलेको प्रोमो लञ्च कार्यक्रममा राजेशलाई उक्त रकम प्रदान गरिएको हो ।
नेपाल र अमेरिकामा दर्ता भएको राजेश पायल राई फाउण्डेशनले सामाजिक हितका कार्य गर्दै आइरहेको छ । यद्पी फाउण्डेशनका लागि अहिलेसम्म हात सहयोगको हात नफैलाएको राजेशले बताए । ‘जय भोले’मा राजेशले स्वर दिएको गीत सार्वजनिक हुंन बाँकी छ ।